Manidina fota, maimaim-poana amin'ny fotoana voafetra | Vaovao IPhone
Aseho anao indray ny lalao iray izay afaka alaina maimaimpoana mandritra ny fotoana voafetra mandritra ny fotoana voafetra. Amin'ity indray mitoraka ity isika dia miresaka momba ny Flying Slime, lalao 2D izay tsy maintsy hialantsika amin'ireo mpikapa ny olombelona ary hanangona fon'ny fanahy hanangana ny tranon'izy ireo. Ity lalao ity manolotra antsika maody lalao roa. Amin'ny lafiny iray dia hitantsika ny fomba hahavelomantsika izay i Slime dia tokony hialana amin'ireo mpikapa mampiasa vato vato voaangona mba hamonjy ireo sakaizany. Amin'ny maody sakana, Slime dia tsy maintsy mandresy azy ireo hahita ny fon'ny fanahy mba hanarenana ny tranony.
Ny fanaraha-maso amin'ity lalao ity dia mety ho toa sarotra tamin'ny voalohany, saingy rehefa afaka kelikely, andao hatsangana hihazona azy ireo. Flying Slime dia mifanaraka amin'ny iOS 6.0 na taty aoriana ary mifanaraka amin'ny iPhone, iPad ary iPod touch. Izy io dia mitana mihoatra ny 70 MB amin'ny fitaovantsika ary hahatonga antsika hankafy ora vitsivitsy amin'ny lalao miaraka amin'ny lohahevitra hafa noho ny mahazatra ary koa ny lalao. Flying Slime dia mazàna vidiana ao amin'ny App Store 2,99 euro fa mandritra ny fotoana voafetra dia azontsika atao ny misintona azy maimaim-poana amin'ny alàlan'ny rohy navelanao tany amin'ny faran'ny lahatsoratra.
Fitaovana manidina manidina
Tetikasa manintona, endrika sariitatra mahafatifaty sy madio
Fanandramana fianjerana mekanika tena tsara
Mora ny mahazo traikefa lalao feno fanamby
Rafitra filaharana hanehoana ny zava-bitanao
Rafitry ny horonan-tsary miorina hianarana avy amin'ny diplaoman-tsofina master ary hizara horonan-tsary amin'ny namanao
Fomba fihantsiana isan-karazany: tafavoaka velona, ​​haingam-pandeha ary hamaha ny teny miafinao amin'ny sakana
Asao ny namana hifaninana
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Lalao IPhone » Manidina fota, maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra
Ahoana ny fanivanana mailaka ao amin'ny iOS 10 ho an'ny iPhone sy iPad